Ngaba iAuras iyinyani | Iimpawu zeAura kunye neentsingiselo - Iintsingiselo Iintsingiselo
Ngaba iAuras iyinyani
Okwesibini kuphela 'Ndibona abantu abafileyo', abantu abathandwayo abahlekisayo abalandelayo bahlala beqhekeza xa befumanisa ukuba ndingumntu ophakathi kwengqondo nethi 'Umbala mni umbala wam'.
Ngaba ukuqaqamba kwivili lemibala?
Hayi, ubuncinci bayazi malunga ne-auras-ish.
Oku kuthetha ukuba 'siya' kubo '. indlela yokubonisa ukuhleka
Ngenxa yokubhengeza ngokupheleleyo, andikaze ndibone i-aura. Ke yintoni le ndiyenzayo xa ndibhala inqaku malunga nabo, akunjalo? Kulungile…
Njengayo yonke imicimbi ye-Woo Woo, ndijonge kwisayensi ngoncedo lokuqonda izizathu nezizathu zoko kungenakucaciswa-kulungile, ndichazelwe ubuncinci.
Ndifumanisa ukuba, kunye nesigqibo sam sokuphila ubomi bokholo kunye nokomoya, ukuqonda idatha esekwe kwisayensi okwangoku ikundinceda ekucofeni kude kubume bam bobuthixo- okt 'Ndibona abantu abaninzi abafileyo'. (Isebenza njani le nto sisihloko selinye inqaku.)
Kulungile, ke ngaba iAuras ziyinyani?
Isilumkiso seSpoiler: Akukho mntu unokutsho ngokuqinisekileyo.
Ukufumanisa ukuba ii-aura ziyinyani na kunengqiqo yokulandela ukubonakala kwazo okokuqala embalini. Ukuba ufunda i-Intanethi, uyakufumanisa ukuba amakhulu amanqaku akhankanya ii-aura zisetyenziswa kubugcisa kuyo yonke iminyaka (wow, alliteration alert!).
Ababhali bangenisa oku njengobungqina obubambekayo bokuba azikho nje ii-aura kuphela kodwa zibonwe ngokucacileyo kwaye zamkelwa njengezinyani ngookhokho bethu kuba ubugcisa buxelisa ubomi, akunjalo?
Gumba ubuncinci obuncinci kwaye uya kufumanisa ukuba iihalos ezisetyenziswe kubugcisa zinokubangelwa yimeko encinci ye-anthropomorphism-ukubonakaliswa kweempawu zomntu kuyo nayiphi na into ngaphandle komntu.
yintoni le ndoda ye-aquarius ifumana umtsalane kumfazi wepisces
Iihalos zegolide kunye nemitha esihlala siyibona kwimisebenzi yobugcisa ubukhulu becala zizithixo ezijikelezileyo kunye neempawu zonqulo kunye nabalawuli belo xesha.
Kunqabile isiqwenga esibonisa uJoe Blow cocooned kwi-halo ngelixesha elima intsimi yakhe yengqolowa.
'I-aura' kwezi meko kucingelwa ukuba ngumsebenzi wamagcisa emboniso abonisa uphawu lwelanga (ukhanyiso) eluntwini.
Oko kwathiwa, uthini malunga 'nobuso obuqaqambileyo bukaMoses' (iEksodus)? Ngaba oku kulandelayo kungaguqulelwa ngokoqobo?
34:29 Kwathi, ekuhleni kukaMoses entabeni yaseSinayi, amacwecwe omabini esingqino esesandleni sikaMoses ekuhleni kwakhe entabeni, akazi yena, ukuba ulusu lobuso bakhe belukhazimla ekuthetheni kwakhe naye.
Ukukhawuleza phambili kwimizobo yomqolomba ukuya ngasekupheleni kweminyaka yoo-1930.
USemyon Davidovich Kirlian wafumanisa ngengozi ukuba 'wayenokufota' ukukhutshwa kombane (amandla) ngaloo ndlela enika umtsalane olungileyo we-psychic sonke siyazi kwaye siyayithanda namhlanje-I-Kirlian Photography booth.
Ngo-1960 ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi ze-psychedelic kunye nokuzalwa kwentshukumo ye-New Age kwenze ukuba ii-auras zikwimo yokomoya ngokukhawuleza kunokuba unokuthi, 'Imibala.' Bayaphila! '
'Ukuba uThixo ulahle iasidi, ingaba uza kubabona abantu?' -USteven Wright
Ngo-2000 sineentlobo ngeentlobo zezimvo ngokubhekisele kwinyani ye-auras;
Ukukhanya komntu okubangelwa zizifo ezibangelwa ziintsholongwane. - (Alvarado, 1987)
Inkqubo ye-GDV (iBioelectrophotography)
Okokugqibela, ikho nengcinga yesayensi ethi amandla okubona ii-aura ayinyani ngokupheleleyo. Umkhabi uthathelwa ingqalelo njengemeko ye-neuropsychological 'imeko'.
Kwinto ebonakalayo eyaziwa ngokuba yi 'synesthesia' (ngakumbi, 'i-synesthesia yeemvakalelo') imimandla yobuchopho enoxanduva lokuqhubekeka kohlobo ngalunye lwesistim se-sensory sinxibelelene kakhulu.
Ngale ndlela, ii-synesthetes (abo babona i-auras) banokubona okanye banambitha isandi, bazive incasa, okanye badibanise abantu ngombala othile.
Kufana nokuba xa into oyityayo 'inencasa' njengevumba oqhelene nalo kakhulu.
Ukuba ii-Auras ziyinyani, ngaba singazibona?
Ngeliphandle, ukuzama ukuza nobungqina obaneleyo bokuphanda ubungqina bokuxhasa ngokupheleleyo impendulo 'ewe' kundenze ndabona i-auras njengentloko ebekiweyo. Nangona kunjalo, nantsi impendulo yam yokugqibela - Ewe yiyo ke le nto ndicinga njalo…
Ekuqaleni kweli nqaku ndatsho ukuba ndingumntu ophakathi kwezobuchwephesha. Ngelixa ndifuna ukukholelwa ukuba abo ndibathandayo bawelele 'bathethe' kum kanye ngexesha elililo, xa umxhasi ezifuna, andinabo ubungqina obuqinisekileyo bokuba njalo. Intsingiselo, inokuba yinto entle yokuba amandla ombane okanye ombane omphefumlo ngasemva kwesigqubuthelo ulapha kwiirekhodi ze-etheric okanye zeAkashic.
Ngenxa yezizathu ezingekaziwa kum, kuyenzeka ndikwazi ukufumana eso siphumo sombane kwaye ndisichaze-ngokungathi siselfowuni yomntu.
Kule nto, xa umntu ongaziwayo efika ukuze afundwe kwaye ndithi, 'Ndibona umfazi wase-Caucasian ophakathi kwiminyaka engamashumi amane obonakala ngathi unentambula, ngaba oku kuyavakala nakuwe?' Uphendule athi, 'Umama wam usweleke kwiiveki ezi-6 ezidlulileyo. Wayemhlophe, 47 kwaye engumfundisi-ntsapho womculo owayeqokelela iintambula. ' ke iyavakala kum ukuba ii-aura ziyinyani kwaye siyazibona.
KULUNGILE. Ke siyibona njani iAuras?
Kukho izigidi zeencwadi, iiwebhusayithi, amanqaku eemagazini, njl njl njl.njl.
Akukho mntu 'ulungile'.
Elona cebiso lam lililo kukuba, yigcine ilula. Yonke into nayo yonke into yenziwe ngamandla ombane. Akukho nto injengento eqinileyo. Siliqela nje lamasuntswana enza iHula ngesantya se-warp.
Kodwa, ukuba uphumle ngokwaneleyo - ucothe ngokwaneleyo - uyawubona umdaniso. Yinto efana nendlela onokuwabona ngayo amaza obushushu aphuma ngaphandle kwemoto.
Ke qhekeza ingubo yengca kunye nebhokhonathi! Thatha i-Mai Tai kwaye ubukele la maza obushushu, amaza obushushu ashushu ...
Funda konke malunga neAuras…
Ngaba ufuna ubulumko bokufanisa ngemibala yeAura? Ngaba ufuna ukwazi intsingiselo engcwele kunye nophawu lwemibala yeAura? Cofa ukuze ufunde ngokugqibeleleyo Imibala yeAura loo cocoon umzimba womzimba wazo zonke izinto eziphilayo.
Uyibona njani iAuras
Ngaba ungumphili wamandla, osebenza ngokukhanya, onobuchule, okanye ophakathi kwaye ufuna ukufunda indlela yokubona iAuras? Ngaba uyi-empath kwaye ujonga ukuba kutheni 'ubona' imibala ejikeleze abantu, ezinye izilwanyana, kunye nezityalo? Fumana ulwazi olunzulu malunga indlela yokubona iAuras - imibala kaThixo ekhanyayo kwaye iphuma kuzo zonke izinto eziphilayo 'intsimi yamandla e-auric.
loluphi uphawu venus ngoku
'I-aura yomntu iyintsimi yamandla kunye nokubonakaliswa kwamandla obomi achuliweyo emzimbeni. La mandla asenza into esiyiyo kwaye, emva koko, achaphazeleka ngokusingqongileyo kunye nendlela yokuphila. I-aura ibonisa impilo yethu, isimilo, ukusebenza kwengqondo kunye nemeko yeemvakalelo. Ikwabonisa isifo - amaxesha amaninzi ngaphambi kokuqala kweempawu. ' -URobert Bruce.
Cofa ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga yintoni iAuras .
indoda eyi-virgo kunye ne-taurus yomfazi ngesondo
I-sagittarius indoda kunye ne-virgo umfazi ebhedini
umfazi womfazi onomhlaza ebhedini